M/weynaha cusub ee puntland oo ku dhawaaqey golaha wasiirada puntland. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka M/weynaha cusub ee puntland oo ku dhawaaqey golaha wasiirada puntland.
M/weynaha cusub ee puntland oo ku dhawaaqey golaha wasiirada puntland.
M/weynaha cusub ee dhawaan la doortey C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa soo dhisey kuna dhawaaqey golahiisa wasiirada ee dawladgoboleedka Puntland.
Golaha wasiirada uu ku dhawaaqey C/weli Gaas ayaa tiro ahaan gaaraya 47 isugu jira wasiiro,wasiir dawleyaal iyo wasiiro ku xigeeno,waxaana kamid ah wasiirada rag la tartamey markii m/weynaha loo tartamayey taas oo u muuqata in ay heshiis ku galeen mar hore.
Waxeyna wasiiradu ka badanyihiin kuwii hore u jiri jirey oo ay ku laban laabmayaan,waxeyna u muuqataa in uu qanciyo dad badan iyo qaybo ururo bulshada,sidaas awgeed C/weli Cali Gaas ayaa u muuqda nin ciyaaraya arrimo siyaasadeed oo baaxad weyn dad badana aysan fahmeyn.
Waa markii u horeysey ee gole xukuumad puntland ay leedahey la gaarsiiyo tirada intaas la’ eg,waxeyna kusoo beegmeysaa iyadoo ay marti ku yihiin garoowe r/wasarihii hore Cali Max’d Geedi iyo C/raxmaan Baadiyoow.
Previous articleGaari ay leeyihiin ciidamada Amisom ee Yugandha oo si bareer ah u jiirey qof rayid ah wadada Maka almukarama.
Next articleGudoomiyihii gobolka Baay C/laahi Hoosow oo muqdisho lagu xirey..